The Irrawaddy's Blog: ဗိုလ်ကြီးမမတို့ တခေတ်ဆန်းပြီ
သင်တန်းဆင်း ဗိုလ်ကြီးမမတွေဟာ အခုဆို တပ်မတော် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ တို့မှာ အသီး သီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါတော့မယ်။
တချိန်ကတော့ စစ်ဆေးရုံတွေမှာ အမျိုးသမီး ဆရာဝန် စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့ သူနာပြု စစ်သမီးတွေကိုသာ မြင်တွေ့ ခဲ့ရ ပေမယ့် အခုဆို မဟာဘွဲ့ရ အမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းတွေကို ဗိုလ်အဆင့် တွေနဲ့ စတင်မြင်တွေ့ရပါပြီ။
အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းဆင်းပွဲကို ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သလို ထူးချွန် အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းတွေကိုလည်း ဆုချီးမြှင့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
တပ်မတော် (ကြည်း) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း (မှော်ဘီ) ဘွဲ့ရ အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁) က အကောင်းဆုံး ဗိုလ်လောင်း ဆုရရှိသူက ဗိုလ်လောင်းအမှတ်(၈၂) ဗိုလ်လောင်း လေးနွယ်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်။
“ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာကြီး၏ အခြေအနေ ကို လေ့လာကြည့်လျှင်လည်းနိုင်ငံ အများအပြားတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူရင်ပေါင်တန်းပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်း၊ အချို့နိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံ အကြီးအကဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်အထိ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာသည်ကို ရဲဘော်တို့ အသိပင်ဖြစ်ကြောင်း” ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်ပြောသွားပါတယ်။
ဒီအပြင် “လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သည့် ကာလတွင်လည်း မြန်မာ အမျိုးသမီး အချို့ သည် တပ်မတော်သို့ ဝင်ရောက် စစ်မှုထမ်းခဲ့ကြကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင်၁၉၅၄ ခုနှစ်က နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အတွက် အမျိုးသမီး စစ်ဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ထူးချွန်ပြောင်
မြောက် သည့် အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းများစွာလည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း” လည်း ထည့်ပြောပါတယ်။
ညပိုင်းမှာတော့ ဂုဏ်ပြု ညစာနဲ့ တည်ခင်းခဲ့တယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာက ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွ ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းသင်တန်းဆင်းပွဲ ပုံတွေ အွန်လိုင်းထဲ ရောက်လာတော့ တပ်မတော်တွင် အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု ဆိုတာကို အရှိန်မြှင့် ခြေလှမ်းတခု တိုးလိုက်တာလို့ စာဖတ်သူတချို့ မှတ်ချက်ပေးတာတွေလည်း တွေ့နေရပါတယ်။
အမျိုးသမီးအင်အား အများအပြား တနေ့ တချိန်တည်းမှာ အရာရှိသင်တန်းဆင်းကြပြီး အရာရှိဖြစ်လာကြတဲ့အတွက် ဗိုလ်ကြီးမမတို့ တခေတ်ဆန်းပြီလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းတွေ အလိုရှိကြောင်း အစိုးရသတင်းစာမှာ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း အမျိုးသမီးတွေကို စစ်အရာရှိအဖြစ် မွေးထုတ်တဲ့အစီအစဉ် အစပြုခြင်းပါပဲ။
အရာရှိသင်တန်း ၆ လခန့် တက်ပြီးရင် ဒုဗိုလ်ရာထူး စတင် ခန့်အပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမအကြိမ်သင်တန်းပြီးလို့ အရာရှိ ၁ဝဝ ကို မွေးထုတ်လိုက်ပါပြီ။
ဒုတိယအကြိမ်သင်တန်းမှာလည်း ဒီအရေအတွက်ထက် ပိုပြီး ခေါ်မလား ဆိုတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှတယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in: Eaint Than Zin , News , Photo , စစ်ရေး , ဓာတ်ပုံ , သတင်း
Presidential candidate must have military vision! Am I thinking too much? Is it too close for one of them to be retired and ran for 2015 elections? Or does it matter for them? As long as they have that qualification, they can compete with DASSK who literally lacks that one. We shouldn't underestimate the current military-based regime. The controversial 2008 constitution tells us all.